5 tabaha khaaska ah si loo hagaajiyo khibrada One UI 2.0 | Androidsis
Mid ka mid ah UI 2.0 ayaa halkan u jooga inuu joogo oo wuxuu noqday degsiimad ahaan mid maqaar caadiya u ah Galaxy-ga. Waan tagnaa in la baro 5 tabaha gaarka ah si loo helo waxqabadka ugu fiican ee suurtogalka ah ilaa lakabkan caadada ah.
In kastoo runta loo sheego iyagu waa qaar iskood u taagan oo kuwo kale oo badan ayaa jira. Runtu waxay tahay inaysan joojinayn hal-abuurnimada iyo hagaajinta khibrada taleefannadeenna, layaab shaqada ay samaysay Samsung noocyadan, haddaba aan horay u sii socono waxyaabahaas gaarka ah ee nooca cusub ee Android 10 ee ku jira One UI 2.0 ee Galaxy Note 10 iyo Galaxy kale.
1 Helitaan deg deg ah mid kasta oo ka mid ah goobaha ogeysiiska
2 Hal tilmaamood UI 2.0
3 Tilmaam ku wareejinta barnaamijyada
4 Tilmaam ku muuji Chrome
5 Ku kici badhanka badhanka kumbuyuutarka
Helitaan deg deg ah mid kasta oo ka mid ah goobaha ogeysiiska
Haddii aan sameyno tilmaam hoos u dhac ah waxaan soo bandhigeynaa ogeysiisyada, haddii aan mid kale sameyno, waxaan lahaan doonnaa galka si dhakhso leh loogu galayo oo leh Bluetooth, GPS, Habeenkii Habeenkii iyo inbadan. Hadda, haddii aad gujiso magaca mid kasta oo ka mid ah dejinta, oo halkii aad uga baahnaan lahayd saxaafaddaas dheer ee isla natiijadaas heshay, waxaad heli doontaa marin toos ah.
Taasi waa haa ka hor oo leh saxaafad dheer oo ku saabsan astaanta Bluetooth Waxaan si toos ah ugu tagnay goobaheeda, hadda adigoo gujinaya magaceeda waxaad sameyn doontaa isla sidaas. Khiyaano aan qiimo lahayn, laakiin mid leh muhiimaddeeda degdegga ah.
Hal tilmaamood UI 2.0
Kama daali doonno ku celintooda, laakiin waa inaad sameysid tilmaamo cusub. Waad u dhaqaajin kartaa sidan:
Dejinta> Muujinta> Baarka Navigation oo dhaqaajiso tilmaamaha shaashadda oo buuxa.
Hadda waxaan ku siinaynaa fursado badan.
Waanuna gujinaynaa "Ka durki dhinacyada iyo hoose"
Xeelad kale ayaa ah in la kiciyo "u oggolow dib u celinta astaamaha" oo sidaas ayaan ku badbaadin doonnaa inaan ku sameyno tilmaanta kor ku xusan kumbuyuutarka. In kasta oo aan sidoo kale haysanno ikhtiyaar kale oo noqon doona mid ka mid ah tabaha soo socda ee gaarka ah ee loogu talagalay Galaxy Note 10 +.
Tilmaam ku wareejinta barnaamijyada
Dhammaan astaamaha One UI 2.0 waxaan ku harnay midka lagu sameeyo salka iyo kan qalooc yar ayaan ku tagi karnaa barnaamijkii hore. Haddii aan mar labaad sameeyno tilmaam isku mid ah waxaan aadi doonnaa tii hore.
Laakiin taasi waa taas haddii aan u yeelno dhinaca ka soo horjeedka iyada oo aan dhowr ilbiriqsi la dhaafin, waxaan ku laaban karnaa kii hore. Waxay qaadataa xoogaa laqabsad, laakiin markaan sameyno, khibrada daalacashada desktop-ka iyo barnaamijyadu waxbadan ayey hagaajinayaan.
Tilmaam ku muuji Chrome
Waa marka laga reebo 5ta khiyaano, maadaama ay ka timid Barmaamijka Google ee u gaarka ah barnaamijka 'Chrome'. Oo tan iyo markii aan ku soconno tilmaamyo halkan illaa halkaa, sidoo kale, xeelad kale oo weyn oo lagu maareeyo baarkooda.
Samee tilmaam midig oo ka baxsan booska URL-ka hoos waxaadna arki doontaa dhammaan tabsyada furan.
Waa khiyaamo fudud laakiin waxay hagaajineysaa khibradda wax badan; gaar ahaan haddii aad ka mid ahayd kuwa isticmaalay badhanka lambarka oo leh tirada tabs furan.
Ku kici badhanka badhanka kumbuyuutarka
Waxay u ekaan kartaa doqon laakiin hayso badhan si aad ugu qariso kumbuyuutarka tilmaamaha Android 10 waa wax aan laga maarmi karin. Gaar ahaan haddii aan isku xirno illaa aan ka helno khibrada.
Aan aadno Dejinta> Muujinta> Baarka Navigation> Dhaqdhaqaaqa shaashadda oo buuxa
Kala dooro ikhtiyaarka Muuji badhanka si aad u qariso kiiboodhka.
Sidan ayaanu si dhakhso ah u qarin karnaa oo markaa ma qarineyso waxa aan sameyneyno markii aan u baahnay. 5 khiyaanooyin gaar ah oo si fiican loogu maareeyo Android 10 Galaxy Note 10 iyo Galaxy kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » 5 xeelado gaar ah oo sifiican loogu maareeyo One UI 2.0 ee Galaxy Note10 + iyo Galaxy kale
Ka caawi Jeremy xallinta xujooyinka badan ee ku yaal bogga Somnium